शिक्षामन्त्री ज्यू, विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षक कहिलेसम्म अपहेलित भएर बस्ने ? « Bagmati Online
शिक्षामन्त्री ज्यू, विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षक कहिलेसम्म अपहेलित भएर बस्ने ?
जुम्ला । विद्यालय कर्मचारी,इसीडी शिक्षक र विद्यालय सहयोगीको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका–८ , कोटघर अवस्थित पाण्डवगुफा माध्यामिक विद्यालयका लेखा कर्मचारी हरि चरण कार्कीले शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई लेखेको खुला पत्र ।
माननीय शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्री ज्यू , म सामुदायिक विद्यालयको लेखा कर्मचारीको तर्फबाट नमस्कार ।
हजुरहरु त मन्त्रालयमा बस्नु भएको छ सञ्चै हुनुहोला । यहाँ म लगायत म जस्तै विद्यालयका कर्मचारी र बाल कक्षा शिक्षक (सहयोगी कार्यकर्ता)हरु चाहिँ जेठ १५ गतेबाट बिसन्चो छौँ । जब जेठ १५ गते बजेट भाषण भयो र उक्त बजेट भाषणमा भएको कर्मचारीको १५% तलब वृद्धि भयो । अनि म र म जस्तै विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकताहरुको मनमा केही कुराहरु उब्जियो र उक्त मनमा लागेका कुराहरु लेख्न मन लाग्यो र हजुरहरुलाई यो पत्र लेखेको छु । यो पत्र यहाँहरु समक्ष पुगेँछ भने २ मिनेट समय निकालेर भएपनी पढिदिनु होला र यो पत्र यहाँहरुले पढ्नुभयो भन्ने खबर पाए भनेमात्र पनि मेरो मन खुशी हुनेछ ।
कुरा जेठ १६ गतेको हो । जब म विद्यालयमा पुगेँ सबै शिक्षक साथिहरुले १५% तलब वृद्धि भयो अब हाम्रो तलब कति भयो हिसाब गरिदिनु त एकाउन्टेन्ट सर भन्नुभयो अनि मैले सबैको हिसाब गरेर यति यति हुन्छ भनेर भनिदिए । त्यसपछि जब मैले मेरो पनि कति भएछ त भनेर हिसाब गर्न खोजे अनि सम्झे ओ हो म त पद बिहिन, श्रेणि बिहिन तर विद्यालयको सम्पुर्ण जिम्मेवारी भएको एउटा कर्मचारी पो हुँ त भन्ने भयो । अनि मेरो कामप्रती म आफैलाइ धिक्कार लाग्यो ।
जब म घर गए अनि परिवारले पनि थाहा पाइछन् अनि सोधिन तलब बढेछ त कति पुग्यो अब हजुरको तलब भनिन ? मैले भने खोइ हिसाब गर्न खोजेको क्यालकुलेटर नै भेटिन पछि भनौला भने र टारे । अनि श्रीमतिको जबाफ आयो होइन अरु बेलामा त तपाईलाई ठूलो–ठूलो हिसाब पनि बिना क्यालकुलेटर गर्नुहुन्थ्यो त । अनि मैले भने हो ठूलो ठूलो हिसाब म बिना क्यालकुलेटर गर्न सक्छु तर मेरो तलब वृद्धि म क्यालकुलेटर बिना गर्न सक्दिन त्यो पनि यस्तो सामान्य क्याल्कुलेटरले होइन । त्यसैले मैले उक्त क्याल्कुलेटर मगाएको छु र कहिले आइपुग्छ अनि हिसाब गरेर बताउँला भने र खाना खाईवरी बिस्तारामा गएर पल्टिए ।
बिस्तारामा पल्टिए पनि निन्द्रा लागेन र मनमा कुराहरु खेल्न थाले र सोचे । मैले विद्यालयमा जागिर खाँदा मेरो अर्थात लेखापालको र निमावि शिक्षक (राहत शिक्षक) को बिज्ञापन एकैदिनमा खुलेको थियो । अनि योग्यता पनि दुबै विज्ञापनमा उत्तिनै अर्थात् १०+२ खोजेको थियो । परीक्षा पनि एकै दिन भयो । लेखापालमा ५ जनाको आबेदन र शिक्षकमा ८ जनाको आवेदन परेको थियो । लिखित भयो । मौखिक भयो । अन्तिम नामवाली प्रकाशन भयो । लेखापालमा मेरो नाम निस्कियो र शिक्षकमा एकजना सरको निस्कियो । योग्यता बराबर, परीक्षा एकै दिन, नामवाली प्रकाशन पनि एकैदिन तर त्यही दिनबाट उहाँको तलब र मेरो तलबमा अन्तर थियो । पछि सरकारले सम्बोधन गर्ला भनेर काम गरिरहे ।
हरेक बर्ष जेठ १५ गते बजेट भाषण हुन्छ । प्रायः बजेट भाषणमा तलब वृद्धि हुन्छ उक्त तलब वृद्धिमा एकै दिन नियुक्ति पाएको शिक्षकको तलब बढेको हुन्छ तर मेरो अर्थात् विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकर्ताको तलब बढ्दैन । यिनिहरु भनेको शिक्षक महासङ्घको राजनीति गर्नका लागि एजेन्डा मात्र रहेछन् । जसरी नेपालमा सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक दलको चुनाबी एजेन्डा भए जस्तै ।
सबैको तलब वृद्धिको हिसाब गर्ने लेखा कर्मचारी, बिहान सबेरैदेखि विद्यालय खोलेर सरसफाईदेखि लिएर सबैकुरा गर्नुपर्ने र सबैभन्दा अन्तिममा विद्यालयको ढोका बन्द गरेर विद्यालयबाट निस्कने कार्यालय सहयोगी र स–साना नानिबाबुको दिशा पिसाब, सिंगान पुछिदिनुपर्ने विद्यालय सहयोगी कार्यकताको चाहिँ किन तलब बढ्दैन ? के यिनिहरु राज्यको नजरभित्र पर्दैनन ? के यिनिहरुलाई महङ्गी बढ्दैन ? आखिर कहिलेसम्म हामी राज्यबाट अपहेलित भएर बस्नुपर्ने ? आदि आदि कुराहरु मनमा खेल्न थाल्यो र पत्र मार्फत व्यक्त गरेको छु ।
पत्र धेरै लामो भए जस्तो लाग्यो । केही समय निकालेर भए पनी झर्को नमानी पढिदिनुहोला । अन्तिममा यहाँहरु शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको पदमा रहिरहँदा विद्यालय कर्मचारी र सहयोगी कार्यकताको तलब वृद्धि र दरबन्दिको रुपमा स्थापना गर्न नसके पनी एउटा सफल मन्त्रीको रुपमा निस्कनु होला, शुभकामना छ ।
हरि चरण कार्की
लेखा कर्मचारी पाण्डवगुफा माध्यामिक विद्यालय
कनकासुन्दरी गाउँपालिका – ८ , कोटघर , जुम्ला ।